Yohane Adiyisɛm 9:1-21
Torobɛnto a ɛto so anum no (1-11)
Mmusu baako atwam; mmusu abien reba (12)
Torobɛnto a ɛto so asia no (13-21)
9 Ɔbɔfo a ɔto so anum no hyɛn ne torobɛnto no.+ Na mihuu nsoromma bi a efi soro abɛhwe asaase so, na wɔde amoa donkudonku+ no ano safe maa no.* 2 Na obuee amoa donkudonku no ano, na wusiw fii amoa no mu bae te sɛ fononoo kɛse mu wusiw, na amoa no mu wusiw no maa owia yɛɛ tumm,*+ na wim nso yɛɛ saa ara. 3 Na ntutummɛ fii wusiw no mu baa asaase so;+ na wɔmaa wɔn tumi, tumi a asaase so nkekantwɛre wɔ no ara bi. 4 Wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnnhaw asaase so wura anaa ahaban momono anaa dua biara, na mmom nnipa a wonni Onyankopɔn ahyɛnsode wɔ wɔn moma so no nko ara na wɔnhaw wɔn.+ 5 Na wɔamma ntutummɛ no kwan sɛ wonkum wɔn, na mmom wɔmaa wɔn kwan sɛ wɔnyɛ wɔn ayayade abosome anum. Ɛyaw a wɔfaa mu no, ɛte sɛ nea akekantwɛre ka obi ma ne ho hyehye no no.+ 6 Saa nna no mu no, nnipa bɛhwehwɛ owu nanso wɔrennya, na wɔbɛpɛ sɛ wowu, nanso owu beguan afi wɔn ho. 7 Ná ntutummɛ no te sɛ apɔnkɔ a wɔasiesie wɔn de wɔn rekɔ ɔko.+ Ná biribi a ɛte sɛ sika kɔkɔɔ ahenkyɛw hyehyɛ wɔn ti, na wɔn anim te sɛ nnipa anim, 8 na wɔwɔ ti nwi te sɛ mmea ti nwi. Na wɔn se te sɛ gyata se,+ 9 na na wɔwɔ nkatabo te sɛ dade nkatabo. Ná wɔn ntaban gyigye te sɛ nteaseɛnam a apɔnkɔ retwe no kridikridi akɔ ɔko.+ 10 Afei nso, na wɔwɔ dua a ɛwowɔ te sɛ nkekantwɛre; na wɔn dua mu na tumi a wɔde bepira nkurɔfo abosome anum+ no wɔ. 11 Wɔwɔ ɔhene a odi wɔn so; ɔno ne amoa donkudonku no bɔfo+ no. Ne din wɔ Hebri mu ne Abadon,* na Greek mu de, ne din de Apolion.* 12 Mmusu* baako atwam. Hwɛ! Mmusu+ abien reba wɔ eyinom akyi. 13 Ɔbɔfo a ɔto so asia+ no hyɛn ne torobɛnto no.+ Na metee nne bi fii sika kɔkɔɔ afɔremuka+ a ɛwɔ Onyankopɔn anim no mmɛn no mu, 14 a ɛreka akyerɛ ɔbɔfo a ɔto so asia a okura torobɛnto no sɛ: “Sansan abɔfo baanan a wɔakyekyere wɔn wɔ asubɔnten kɛse Eufrate+ ho no.” 15 Na abɔfo baanan a wɔasiesie wɔn ama ɛdɔn no, ɛda no, bosome no, ne afe no, wɔsansan wɔn sɛ wonkunkum nnipa no mu nkyekyɛm abiɛsa mu baako. 16 Ná asraafo a wɔtete apɔnkɔ so no dodow yɛ mpem aduonu ahorow mpem du:* Metee wɔn dodow. 17 Na sɛnea mihuu apɔnkɔ no ne wɔn a wɔtete wɔn so wɔ anisoadehu no mu ni: Ná wɔwɔ nkatabo a ɛyɛ kɔɔ te sɛ ogya ne afasebiri ne akokɔsrade; na apɔnkɔ no ti te sɛ agyata+ ti, na ogya ne wusiw ne sɔfe* fii wɔn anom bae. 18 Ɔhaw abiɛsa yi na ekunkum nnipa no mu nkyekyɛm abiɛsa mu baako: ogya ne wusiw ne sɔfe a efi wɔn anom bae no. 19 Apɔnkɔ no anom ne wɔn dua mu na wɔn tumi wɔ. Na wɔn dua te sɛ awɔ, na ɛwɔ ti, na eyi na wɔde pira nkurɔfo. 20 Nanso nnipa a aka a ɔhaw no ankunkum wɔn no ansakra amfi wɔn nsa ano nnwuma ho; wɔannyae ɔsom a wɔde ma ahonhommɔne* ne sika kɔkɔɔ ne dwetɛ ne kɔbere ne abo ne dua ahoni a entumi nhu ade, nte asɛm, na entumi nnantew no.+ 21 Na wɔansakra amfi wɔn awudi ne wɔn ahonhonsɛm ne wɔn aguamammɔ* ne wɔn korɔnbɔ ho.
^ Anaa “nsoromma no.”
^ Anaa “duruu sum.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔsɛe.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔsɛefo.”
^ Anaa “20,000 ahorow 10,000,” kyerɛ sɛ, 200,000,000.